Jordania hanara-maso ireo famoahana an-tserasera sy tranonkala · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Janoary 2019 17:02 GMT
(Lahatsoratra teny anglisy septambra 2007)
Hanara-maso ireo famoahana an-tserasera sy tranonkala i Jordania, hoy ny nambaran'i Nabil Al-Momani, mpanampy ny mpitantana ankapobeny ny departemantan'ny fanontana sy famoahana ao Jordania androany. Manomboka amin'izao fotoana izao dia ho eo ambanin'ny Lalànan'ny Gazety sy ny Famoahana ny tranonkala sy ny gazety elektronika. Nilaza i Al-Momani fa tsy hanery hametraka sivana na fanakanana ho ambonin'ny fahalalaham-pitenenana ny departemantany. Fa hifantoka amin'ny fanaraha-maso izay navoaka sy izay karazana rafi-pitsarana mety ho voakasika raha ilaina.
Misy ny ahiahy goavana fa hitondra ny famerana atsindrin'ny governemanta amin'ny fampitam-baovao hafa ny fomba fanatonan'ny Jordaniana ny aterineto. Miampanga ny famerana vaovao atsindry amin'ny fanaovan-gazety elektronika i Tareq Momani, filohan'ny fikambanan-gazety tamin'ny filazana fa : “Manolotra sisim-pahafahana izay tsy mba sitrahan'ny sehatra fampitam-baovao hafa ny aterineto.
Nanao fehinteny ny tatitra momba ny sivana an'aterineto ao Jordania navoakan'ny Open Net Initiative fa:
Heverina ho misitraka fidirana amin'ny aterineto tsy voasivana ny Jordaniana amin'ny ankapobeny. Na izany aza dia mety hitarika mankany amin'ny fanivanan-tena ataon'ny mpanoratra sasany ny lalànan'ny gazety sy ny famoahana. Na dia manohy amin'ny fampivelarana ny ezaka ahafahana miditra aterineto aza ny governemantan'i Jordana, ny lalàna mametra ny fahafaham-pitenenana no mametraka rivotra manindry manakivy ny resaka malalaka eo amin'ny lafiny politika sy sosialy.
Tamin'ny 3 mey 2007, nosamborina i Ahmad Oweidi al-Abbadi, parlemantera teo aloha 62 taona ary mpitarika ny Hetsi-Pirenena Jordaniana, noho ny fiampangana ny governemanta ho manao kolikoly tao amin'ny taratasy iray misokatra nalefa imailaka tany amin'ny senatera US Harry Reid. “Mampiseho ny fanagadrana an'i Ahmad Oweidi fa tsy nanintsana ny fahazaran-dratsiny ny governemantan'i Jordana manenjika izay mitsikera azy ary mandefa azy ireny any am-ponja,” hoy i Sarah Leah Whitson, tale ao Afovoany Atsinanana ao amin'ny Human Rights Watch.
Tamin'ny Mey 2002, nogadraina higadra 18 volana ho “nandiso sy nanita-baovao” nivoaka tao amin'ny tranonkalan'ny Arab Times, ny vehivavy mpikambana ao amin'ny Antenimiera Jordaniana teo aloha sady mpanandrateny avo ny fahalalaham-pitenenana sady mpikatroky ny zon'ny vehivavy i Toujan al-Faisal. Nahazo famotsoran-keloka avy amin'ny Mpanjaka Abdullah II izy tamin'ny 26 jona 2002 ary navoaka avy ao am-ponja.